Mucjisooyinka GNU / Linux: respin cusub ayaa la heli karaa! Jawaabo ama Distros? | Laga soo bilaabo Linux
Mawduucan ugu horreeya ee Maajo, waxaan ka hadli doonnaa «Mucjisooyinka GNU / Linux », a Dib u dhig (live iyo installable iyo snapshot caadada ah) oo ku saleysan GNU / Linux Distro wac «MX Linux », kaas oo loo abuuray ujeeddooyin ama ujeeddooyin kala duwan.
Iyadoo laga faa’iideysanayo xaqiiqda ah in si rasmi ah loo sii daayay shalay, a nooc cusub 2.3 (3DE4) ka hooseeya magaca magaca Ultimate, waxaa ku habboon in la sahamiyo oo wax yar laga sii faalloodo ayaa la yidhi Dib u dhig.
1 Waa maxay Respin?
2 Ku saabsan MX Linux
3 Mucjisooyinka GNU / Linux: Dib u eegis shaqsiyeed (aan rasmi ahayn) ee MX Linux
3.1 Waa maxay MilagrOS?
3.2 Maxaa ku cusub nooca ugu dambeeya ee MilagrOS GNU / Linux?
3.2.1 Astaamaha guud iyo ujeedooyinka
3.3 Soo dejiso, rakibid, Isticmaal iyo shaashadda
3.3.1 A.- XFCE Desktop Deegaanka
3.3.2 B.- Deegaanka Desktop-ka Plasma
3.3.3 C.- LXQT Desktop Deegaanka
3.3.4 D.- Maamulaha Windows-ka IceWM
3.3.5 E.- FluxBox Maareeyaha Windows
3.3.6 F.- Maamulaha Windows OpenBox
3.3.7 G.- Maamulaha Windows-ka IceWM
4 Jawaabo ama Distros?
Waa maxay Respin?
Kahor intaadan si buuxda u galin si aan uga hadlo isaga Respin «Mucjisooyinka GNU / Linux», waxaa muhiim ah in markale la cadeeyo inay tahay a Dib u dhig. Tan awgeed, waxaan kugula talineynaa daabacaada soo socota:
"Fahmaan Respin, bootable (nool) iyo sawir la rakibi karo ISO oo loo isticmaali karo dhibic soo celin, dhexdhexaad kaydinta iyo / ama dib-u-qaybin GNU / Linux Distribution, iyo adeegyo kale Taasna waxaa laga dhisay ISO ama rakibidda GNU / Linux Distro jirta. Marka laga hadlayo MX Linux, waxaa jira MX Snapshot, oo ah aalad ku habboon ujeedadan, waana beddel casri ah oo hufan oo loogu beddelo aalado kale oo duug ah, sida «Remastersys y Systemback», laakiin taasi kaliya waxay ku shaqaysaa MX Linux." MX Snapshot: Sidee loo abuuraa MX Linux Respin shaqsiyeed oo la rakibo?
Ku saabsan MX Linux
Iyo kuwa aan aqoon ama isticmaalin «MX Linux » waxaan kugula talineynaa inaad sahamiso qoraalladayada soo socda ee soo socda Qaybinta GNU / Linux, si ay u ogaadaan una arkaan awooddiisa xiisaha leh, ee aan ku koobnayn abuurka Jawaabaha:
"MX Linux waa una Distro GNU / Linux ayaa si iskaashi ah uga dhexeeyay bulshooyinka antiX iyo MX Linux. Waana qayb ka mid ah qoysaska Nidaamyada Hawlgalka ee loogu talagalay in lagu daro kombuyuutarro qurxoon oo hufan leh degganaansho iyo waxqabad adag. Qalabkeeda garaafka ah ayaa bixiya hab fudud oo lagu dhammaystiro hawlo kala duwan oo kala duwan, halka Live USB iyo aaladaha wax lagu sawiro ee dhaxalka ah ee laga helo antiX ay ku darayaan soo-qaadasho la yaab leh iyo awood dib-u-habeyn wanaagsan Intaa waxaa dheer, waxay leedahay taageero ballaaran oo laga heli karo fiidiyowyo, dukumiintiyo iyo gole aad u saaxiibtinimo leh.".
MX-19.3: MX Linux, DistroWatch lambarka 1 ayaa la cusbooneysiiyay
MX Linux: Wuxuu Sii Wadaa Hogaaminta Qiimeynta DistroWatch Oo Layaab Leh
MX Linux: Wararkii ugu dambeeyay ee bisha Febraayo 2020
Mucjisooyinka GNU / Linux: Dib u eegis shaqsiyeed (aan rasmi ahayn) ee MX Linux
Waa maxay MilagrOS?
El Respin «Mucjisooyinka GNU / Linux» waa siduu yidhi degel rasmi ah loo yaqaan "Mashruuca Tic Tac" waa tan xigta:
"MilagrOS GNU / Linux, waa daabacaad aan rasmi ahayn (Respin) ee MX-Linux Distro. Taas oo la imaanaysa qaabayn aad u xad dhaaf ah iyo iswaafajin, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon kombiyuutarada 64-bit ah, labadaba khayraad hoose ama duug ah iyo waliba casri iyo heer sare, iyo waliba dadka isticmaala ee aan lahayn awood internet ama xaddidan iyo aqoonta GNU / Linux. Marka la helo (la soo dejiyo) oo la rakibo, waxaa loo isticmaali karaa si hufan oo hufan iyada oo aan loo baahnayn internetka, maadaama wax kasta oo aad u baahan tahay iyo in ka badanba horay loo sii rakibay". Mucjisooyinka GNU / Linux (New MinerOS)
Maxaa ku cusub nooca ugu dambeeya ee MilagrOS GNU / Linux?
Astaamaha guud iyo ujeedooyinka
Guud ahaan, Respin wuxuu leeyahay astaamaha soo socda iyo ujeedooyinka guud, dhammaan noocyadiisa:
Xirmooyinka kaladuwan ee ballaaran (firmware, maktabadaha iyo codsiyada) ujeedada guud, iyo ujeedooyinka gaarka ah, sida, wadayaasha qalabka (LAN iyo shabakadaha WiFi, Printers iyo Multifunctional) iyo barnaamijyada loogu talagalay xafiiska iyo adeegsiga farsamada, multimedia iyo gamer, iyo macdanta dhijitaalka ah.
Dejinta wanaagsan iyo habeyn, isticmaalkeeda hooseeya ee CPU iyo RAM bilowgiisa, iyo sidoo kale soonkiisa shid iyo dami.
Iswaafajin soo jiidasho leh ee ka mid ah Degaankaaga Desktop-kaaga ee kala duwan (DEs) iyo Maareeyayaasha Daaqadaha (WMs), oo horeba loogu soo daray, loo rakibay oo loo qaabeeyey.
Ku habboonaanta, iyadoo la raacayo dhadhanka isticmaalaha iyo shuruudaha kombiyuutarka la adeegsaday, iyada oo loo marayo mid kasta oo ka mid ah deegaannada uu ka kooban yahay Desktop (Des) iyo Maamulayaasha Windows (WMs)
Waqti ku badbaadi howlaha guud, sida: rakibaado dhaadheer, qaabeyn iyo qaabeyn loo sameeyo Nidaamka Howlgalka, iyo sidoo kale waqti qiimo leh oo lagu rakibo iyo qaabeynta qaabeynta qaabeynta.
Ka fogow isticmaalka bilowga ah ee lagama maarmaanka u ah internetka, si aad uhesho GNU / Linux Distro dhameystiran oo shaqeynaya.
Fududee isku mid ahaanta isticmaalka LinuxSi kale haddii loo dhigo, awood u lahaanshaha isla GNU / Linux Distro oo isku qaab ah kombiyuutarada kala duwan, iyo sidoo kale inaad meel walba ku dhex wadan karto USB Drive-ka, labadaba sida Distro loo isticmaalo maalin kasta iyo sida Rescue iyo Repair Distro .
Kii ugu dambeeyay nooca 2.3 (3DE4) Ultimate, ayaa si rasmi ah loo sii daayay 01 / 05 / 2021, oo leh wararka soo socda ee la xiriira midkiisii ​​hore nooca 2.2 (3DE3) Omega:
Xirmo yar ayaa lagu daray, sida: adobe-flashplugin, anydesk, atmel-firmware, blender, caliber, clamav, codeblocks, discord, exodus, flatpak (kaliya barnaamijyadaada iyo walxaha aad rakibtay ma ahan barnaamijka), gnome-box, librecad, lxc, krita, kdenlive, papirus- icons-themes, scratch, thunderbird, uuid-dev iyo uuid-runtime, maareeyaha wanaagsan, khamri, iyo barnaamijyo kale oo badan iyo maktabado.
Xirmooyinka cusub ayaa lagu soo daray, sida: atomicwallet, byobu, dvdstyler, dvdisaster, gamemode, google-chrome, gpodder, intel-gpu-tools, libcurl4-openssl-dev, libgl1-mesa-glx, libqt5websockets5, linux-firmware, multidoge, Python-newt, Python-setupt , pywall, shaashadda, simcreencrerecorder, ogeysiis xariif ah, geed, noocyo kala duwan, xorg-server-source, zenmap.
Maareeyaha Daaqadda Cusub ayaa lagu daray: Hadda waxaa ku jira IceWM, oo lagu daray FluxBox, OpenBox iyo I3WM. Iyo Degaanada Desktop-ka: XFCE, Plasma iyo LXQT.
Wax ka bedel hal ku samee ISO ka yar: Nooca 2.3 (3DE4) Ultimate wuxuu hadda ku yimaadaa hal 3.2 GB ISO (+/- 3.4 GB net), oo ka duwan noocii hore ee 2.2 (3DE3) oo ku yimid 2 daabacadood, ISO Full wac +/- 4.4 GB Omega iyo ISO Lite wac +/- 2.2 GB Alfa.
Soo dejiso, rakibid, Isticmaal iyo shaashadda
Sida laga soo xigtay boggeeda rasmiga ah, horeyba loo soo sheegay, xiriiriyeyaasha soo dejintu waa sida soo socota:
Soo dejiso MilagrOS 2.3 iyo 2.2 -> GDrive - Mega
Soo dejiso MilagrOS 2.0 iyo 2.1 -> Mega
Sidoo kale waad isku dayi kartaa «MilagrOS GNU / Linux» oo ku yaal bogga "DistroTest" adoo gujinaya xiriiriyaha soo socda: Isku day MilagrOS GNU / Linux 2.X Khadka tooska ah ee DistroTest.
Rakibideeda iyo isticmaalkeeda guud waxay la mid tahay tan kuwa kale «MX Linux », sidaa darteed way ku filnaan doontaa in la arko buug kasta ama rakibaadda oo fiidiyow loo isticmaalo GNU / Linux Distro. Farqiga dhabta ahi waa taas «MX Linux » yimaado oo keliya leh XFCE, ama Plasma ama FluxBox, halka "Mucjisooyinka GNU / Linux" waxaad isticmaali kartaa mid kasta oo ka mid ah noocyadeeda kala duwan DEs iyo WMs.
Sidaa darteed, marka la rakibo, "Mucjisooyinka GNU / Linux" waxaa lagu bilaabi karaa mid kasta oo ka mid ah noocyadeeda kala duwan DEs iyo WMs, sida hoos ka muuqata:
A.- XFCE Desktop Deegaanka
B.- Deegaanka Desktop-ka Plasma
C.- LXQT Desktop Deegaanka
D.- Maamulaha Windows-ka IceWM
E.- FluxBox Maareeyaha Windows
F.- Maamulaha Windows OpenBox
G.- Maamulaha Windows-ka IceWM
Jawaabo ama Distros?
Sidaad arki karto, a Dib u dhig lagu sameeyay MX Linux ama Antix waxay noqon kartaa a bedel fiican kuwa ka bilow adduunka Linux ama leedahay hanashada yar ee rakibaadda, qaabeynta iyo habsami u socodka ee a GNU / Linux Distro, sida, MX Linux ama Antix saafi ah ama Distros kale oo la mid ah Debian GNU / Linux, tan iyo, inkasta oo ay aad u fiican yihiin, waxay badanaa u baahan yihiin internetka si ay u fuliyaan rakibo dhammaystiran oo dhammaystiran oo ay la socdaan wakhti rakibid dheer, qaabeyn, hagaajin iyo habeyn.
Un Dib u dhig wuxuu leeyahay faa iidada lagu abuuri karo baahida loo qabo isticmaale, koox bulsho ama urur, yareynta adeegsiga internetka si guul leh loogu rakibo hal ama dhowr nooc oo kombiyuutaro ah, iyo yareynta kharashka saacadaha / shaqada iyo doorbidida isku mid ahaanshaha dhammaan rakibaadda.
Halka, a GNU / Linux Distro saafi ah sida Debian, Ubuntu, Mint kuwa kalena badiyaa waa kaamil ah ama ku habboon celceliska ama adeegsadayaasha horumarsan adduunka Linux, maaddaama ay kaliya keenaan waxa ugu yar ee lagama maarmaanka u ah ISO yar oo sidaas u sheegay isticmaalaha wuxuu ka dhisayaa saldhig adag iyo internetka wax kasta oo lagama maarmaan u ah, labadaba kumbuyuutar iyo server, haddii loo baahdo.
Iyo sida oo kale "Mucjisooyinka GNU / Linux" ayaa loo dhisay qalab 64 Bit ah oo casri ah wax yar ama badan oo ilo ah, waxaad ku sameyn kartaa Respin MX Linux ama Antix waayo, kombiyuutarada jir 32-bit ilo yar ama la yareeyay, sida, Jawaab -celinta loo yaqaan «Loc OS» y Cereus.
Ugu dambeyntiina, haddii aad ka heshay dhammaan sababahan, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sahamiso daabacaaddan kale ee hore ee la xiriirta:
Distros: Yar, fudeyd, fudeyd iyo hal ujeedo ah ama dhinac kale?
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «MilagrOS» GNU / Linux, Respin xiiso leh oo casri ah (live iyo installable iyo snapshot caadiya) oo ku saleysan «MX Linux », kaas oo waliba la yimaada a habeyn xad dhaaf ah iyo iswaafajin, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon Kumbuyuutarrada "64 Bit" qaabeyn kasta; noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Mucjisooyinka GNU / Linux: respin cusub ayaa la heli karaa! Jawaabo ama Distros?
degmada anti dijo
In la yiraahdo tani way ka fiicnaan kartaa debian, taasi waa xamaasad iyo wax yar oo ku saabsan Linux. Mxlinux waa duruus aan xumaanayn, waxaan ku rakibay dhawr bilood waanan ku idlaaday tirtiriddeeda, maxaa yeelay waa hargab wali wax badan haysa, waxay leedahay cilado joogto ah oo aakhirka taabanaya kubadahaaga, waayo tusaale ahaan kumbuyuutarku had iyo jeer sifiican ayuu u shaqeyn jiray habeenkiina ma uusan ogaan iyaga iyo waxyaabo badan oo had iyo jeer si wanaagsan u socday oo adiga oo aan waxba ka qaban distoorka si lama filaan ah u fashilmay. Pc kale waxaan la joogay baaritaanka debian mudo 3 sano ah 3 sano gudahood maalinti wali ma imaanin marka dhib kuma qabin waana tijaabinta debian, taas oo loo maleynayo in la tijaabinayo iyo bua oo aan xasilooneyn iyo wax la mid ah. Xaqiiqda, jahliga saafiga ah, waxaan dhib badan kala kulmay debian xasilloon marka loo eego tijaabinta debian waana ogahay dadka 20-ka sano dheer ku qaatay baaritaanka debian-ka dhib badana ma lahan, debianku waa debian badan. Xilligan xubuntu way kafiican tahay mxlinux iyo Linux mint, mxlinux waxaan ku badalay xubuntu waana waxa ugu fiican ee aan sameeyay iyo tan aad halkan ku soo bandhigayso wax ka badan ma ahan waqti bambad la buux dhaafiyay zillion kun oo shey, mxlinux-na waxaad bixineysaa kala bar noloshaada ka tirtirida waxyaabo badan oo aan waxtar lahayn, maxaa yeelay hadaad saarto dufan badan, dami oo aan tagno, wax aan micno lahayn, tan ayaa ah anti distro.
Ku jawaab Antidistro
Salaan, Antidistro. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Iyada oo laga jawaabayo waxaad muujisay, waxaan yara hagaajiyay weedhan, maxaa yeelay hubaashii Respin wuxuu u noqon karaa bedel fiican kuwa ka bilaaba dunida Linux ama aqoon yar u leh rakibaadda, qaabeynta iyo habeynta nidaamka GNU Distro / Linux , sida khabiir ama isticmaale aan Windows ahayn, halka GNU / Linux Distro saafi ah sida Debian, Ubuntu, Mint iyo kuwa kale badiyaa ay kaamil yihiin ama ku habboon yihiin celcelis ahaan ama isticmaaleyaasha sare ee Linux World, maadaama, ay kaliya keenaan waxa ugu yar ee lagama maarmaanka ah in yar oo ISO ah sidaa darteed, ayuu yidhi isticmaalehu wuxuu ka dhisayaa saldhig adag iyo internetka wax kasta oo lagama maarmaan u ah, labadaba kumbuyuutar iyo server, haddii loo baahdo.
Haddii ay kaliya ka shaqeyso sida khaaska ah ee 'distro' ah, dan yar ayaa leh jawaab.
Salaan, Diego. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Dhab ahaantiina, aan rajeyno in qalabka MX Snapshot uu u noqdo mid caalami ah kuwa kale ee GNU / Linux Distros. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira habab dhowr ah (qalab) la heli karo inkasta oo aysan ahayn sida ugu wax ku oolsan ama u fududahay isticmaalka, sida Linux Respinhttps://linuxrespin.org/) iyo RemasterSys. Tan dambe, waxaan horay u adeegsaday, Ubuntu 18.04 waxaanan ka dhigay respin aad u wanaagsan oo lagu rakibi karo. Dabcan, had iyo jeer kuwa aadka u horumarsan, waa in la hirgeliyo LFS (Linux From Scratch) illaa laga bilaabo xoqida, sameyso caado u gaar ah Distro sidaad u jeceshahay. Waxaan rajeyneynaa, haddii taasi dhacdo, GNU / Linux Distro kasta inay sii deyn doonto aalad u gaar ah oo lagu sameeyo Jawaab celinta.
Hummm, waxaan ku dhagan doonaa lintayda 'Mint 20 Linux' oo si aad u fiican u shaqeysa, dabcan haddii ay u tahay kuwa kuwa ku bilaaba Linux si wanaagsan, waxaa jira distro kale oo kuwa bilaaba Linux ay jeclaan doonaan sababtoo ah sida ay u shaqeyso iyo waxay la timaadaa wax kasta oo horay loo rakibay, waa Zorin. salaan
Waad salaaman tihiin, Octavio. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Xaqiiqdii, isticmaalka respin laga sameeyay wixii GNU / Linux Distro ah, oo loogu talagalay qof, koox, bulsho ama urur wuxuu leeyahay faa iidooyin badan, gaar ahaan kuwa ka bilaabaya adduunkan Bilaashka ah ee Bilaashka ah, Source Open iyo GNU / Linux. Oo ku saabsan Zorin, waxaan u maleynayaa inay tahay wax la yaab leh oo qurux badan, gaar ahaan kuwa cusub iyo kuwa bilowga ah.
Waan jeclahay Milagros GNU / Linux, laakiin waxay leedahay dhibaato sida Motherboard-ka MX-LINUX, Flatpak. Haddii aad isku daydo inaad ku rakibto xirmo kasta Flatpak, mid ayaa qaadanaya weligiis iyo laba, wuxuu si dhakhso ah u burburiyaa kombuyuutarka adigoon xitaa awoodin inuu furo Thunar daqiiqado.
Ku jawaab Arangoiti
Salaan, Aranqoti. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Anigu iskama tijaabin flatpak-yada kale ee 'Distros', tan iyo markii aan isticmaali jiray MX Linux iyo MilagrOS muddo 3 sano ah. Laakiin, adigoon ogeyn inta rakibaadda xirmo flatpak ah ay qaadaneyso celcelis ahaan, waxaan dareemayaa taas MX Linux / MilagrOS oo qaadaneysa waqti aad u badan.
Hagaag, way duulayaan, sifiican uma garanayo meesha dhibaatadu kajirto, laakiin waxaan horeyba ugu arkay fagaarayaasha in wax lamid ah ay ka dhacaan MX-LINUX iyo MilagrOS, mana aanan arkin xalal waana wax laga xishoodo, maadaama FLATPAK uu yahay baahsan maalin kasta oo waxaad u oggolaaneysaa inaad ku rakibto noocyada ugu dambeeyay ee barnaamijyo badan
Xaqiiqdii. Iyo haa, Flatpak waxbadan ayuu balan qaadayaa marka loo eego Snap. AppImage wuxuu ku jiraa dagaalka si uu isu muujiyo.
Waxaan hayaa Respin-kani oo ku rakiban laptop-ka AMD E1-2500 oo si xariifnimo ku dheehan tahay waxtar leh 4GB wan weyn. Runtu waxay tahay inay si fiican u socoto, kooxdu aad ayey u dhaqso badan tahay. Kumbuyuutarkan waxaan horey ugu rakibay Mx-Linux oo leh KDE (waxaan ku isticmaalaa isla desktop-ka MilagrOS) xawaaraha kumbuyuutarkuna wuxuu ahaa mid quus ah.
Ujeeddadaydu waqti ka dib waa inaan ku rakibo Debian kumbuyuutarka KDE kombuyuutarkaas, laakiin ma ogi haddii aan heli doono xanaaqaas uu hadda ku haysto MilagrOS. Ma aqaano haddii aad sameyn kartid hage yar ama tababar ku saabsan kuwa «habeynta iyo hagaajinta wanaagsan, isticmaalkeeda hooseeya ee CPU iyo RAM bilowga, iyo sidoo kale soonkeeda shid iyo demiba» ee aad ku dhex samaysay Respin-kan, maadaama ay si dhab ah u muuqdaan, ama ugu yaraan kumbuyuutarkayga waa la ogaan karaa.
Aad baad ugu mahadsantahay shaqadaada 🙂
Ku jawaab Kirulo
Salaan, Kirulo! Waad ku mahadsantahay faalladaada. In badan oo ka mid ah waxyaabihii laga qabtay MilagrOS waxaan u isticmaalnaa Preload iyo Prelink, marka lagu daro Deborphan iyo Localepurge. Laakiin, asal ahaan barnaamijyo badan, maktabado iyo waxyaabo dheeri ah ayaa la rakibay, waana la hubiyaa in waxa kaliya ee lagama maarmaanka u ah lagu rakibo xusuusta marka la bilaabayo, taas oo ah, curyaaminta adeegyada. Si tan loo sameeyo, waxaan joojineynaa waxa aan daruuriga aheyn bilowga adeegsiga xulashada "Fadhiga iyo Bilowga" ee XFCE iyo barnaamijka Stacer. Sidoo kale, MilagrOS wuxuu adeegsadaa nooca 'AHS' ee MX Linux, laakiin kernel-kii hore ayuu ula jaan qaadi karaa kombiyuutarada ilaha hooseeya. Waxaan kugula talinayaa inaad sahamiso qoraalkan hore si aad u aragto waxa ugu habboon: https://blog.desdelinux.net/como-optimizar-gnu-linux/
Faahfaahin ku saabsan balastarrada ay soo gudbisay Jaamacadda Minnesota ayaa shaaca ka qaaday